Fifidianana Senatera : Mizara vola ny HVM
dimanche, 21 février 2016 12:55
Nabaribary ampahibemaso ka nanaitra ny maro raha tokony ho nijanona ho tsiambaratelo ny fizaram-bola tany SAVA, Distrikan’i Sambava no marimarina kokoa, noho ny fifidianana Loholona.
« Cadeau » moa no voambolana nampiasain’ny Senatera Befitoto Angelin, voafidy tamin'ny anaran’ny Hery Vaovao ho an’i Madagasikara sy ny lehiben’ny Faritra SAVA Velomaro Faustin nanolotra ny vola, nandritra ny lanonana fifampiarahabana tratry ny taona, natao ny zoma teo tao Sambava sady nizarana ny vola.
Ireo Ben’ny tanàna sy ny Mpanolotsaina nandatsa-bato 100% ho an’ny HVM tamin’ny fifidianana Loholona notanterahina ny 29 desambra 2015 no notolorana ny vola. Niisa 4 ireo Kaominina nahazoan’ny HVM vokatra 100% tao anatin’ny Distrikan’i Sambava, ka nomena vola valo tapitrisa Ariary, izany hoe : samy nomena roa tapitrisa Ariary isanisany avy mba ho « cadeau ».
Efa nisy siosiondresaka ihany heno talohan'iny fifidianana Senatra iny mikasika ny fanambazana vola ny mpifidy vaventy fa mbola tsy nahitana porofo ka izao izy navoaka izao.
Niteraka resabe ity fizarana vola ankarihary ity. Nisy ny nametra-panontaniana hoe raha tsy roa tapitrisa Ariary izany dia tsy nifidy ?
Mazava izany izao fa fifidianana ara-bola no nataon'ny HVM tamin'ity fififdianana Loholona ity, karazana Loholona inona moa izany no tiana hitondra eto amin'ny firenena? Aiza ny Bianco amin'izao toe-javatra izao satria dia ny Lehiben'ny Faritra tokony tsy hitsabaka amin'ny resaka politika mihitsy no manolotra ny vola.